Nadwo Ciwaankeedu ahaa “Jamaacada Ictisaam oo u dhexaysa u adeegidda Cadawga iyo Khiyaamaynta Mujaahidiinta” oo lagu qabtay Masjidka Abaa Hureyra magaalada Muqdisho. | Halganka Online
Nadwo Ciwaankeedu ahaa “Jamaacada Ictisaam oo u dhexaysa u adeegidda Cadawga iyo Khiyaamaynta Mujaahidiinta” oo lagu qabtay Masjidka Abaa Hureyra magaalada Muqdisho.
Nadawo diini ah ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana Nadawadan si qota dheer looga sheekeeyay dhibaatada ay umadda Islaamka ka dhax-wadaan Culimada xun ee diinta Islaamka u dhigay sida rabitaankoodu qabo. Nadwadan diiniga ah oo uu soo qaban qaabiyay Maktabka Dacwada iyo Tacliinta Wilaayada Islaamiga Banaadir waxay ka dhacday Masjidka Abaa Hureyra ee magaalada Muqdisho waxaana soo jeedinayay culimo caan ka ah dalka Saomaaliya.
Kumanaan qof ayaa kusoo xaadiray masjidka ay Nadawadu ka socotay si ay shacabku uga faa’iidaystaan duruusta ay culimada Soomaaliyeed ka jeedinayeen halkaasi.
Nadwada Halku dhigeedu wuxuu ahaa “Jamaacada Ictisaam oo u dhexaysa u adeegidda Cadawga iyo Khiyaamaynta Mujaahidiinta”, waxaana si qota dheer uga hadlay culimaa’udiin uu kamid ahaayeen Sheykh Suldaan Mux’med Aalu Muxamed iyo Sheykh Burhaan.
Sheykh Burhaan oo kamid ahaa Culimadii Nadwada duruusta ka bixinaysay ayaa ku dheraaday khiyaamada ay Jaamacada Ictisaam ku sameeyeen diinta Islaamka iyo Jihaadka alle.
Al Ictisaam ayaa la sheegay in ay cadawga ufududaysay sidii ay ku qabsan lahaayeen dalka Somaliya iyagoo soo saaraya Fatwooyin dhanka gaalada u jan jeera balse shacabka isaga dhigayo in ay yihiin culimo xaq sheeg ah.
Shacabka Nadwada dhegaysanayay ayaa si aad ugu baraarugay Khiyaamada Al Ictisaam markii uu Sheykh Burhaan masjidka ka Akhriyay waxyaabihii ku qoraa Bayaankii ay Ictisaamku kasoo saareen Garoowe.
Culimada maanta Nadwada duruusta ka jeedisay waxay bayaaniyeen Dawaabidda sharciga ah ee loo tiirin karo Culima iska yeel yeelka isticmaala dhax dhaxaadnimada fulaynimada ah ee gaalada loogu adeego sheegata.
Takbiir ayaa mar qura is qabsatay markii Sheykh Burhaan ka sheekeeyay waxyaabihii ay Ictisaam ku khiyaameeyeen Mujaahidiinta balse uu alle fashiliyay sida iyagoo Fataawaadkooda ku sheegayay in dhinacyada Somaliya isku haya ay wada Muslimiin yihiin islamarkaana uusan Somaliya ka socon dagaal Jihaad ah.
Ictisaam waxay sheegaan in AMISOM,Mushrikiinta qabuura galeenka, DKMG ah,Shabaabul Mujaahidiin, Xisbul Islaam ay dhamaantood yihiin Muslimiin dagaalka u dhexeeyana yahay mid Fitno ah taas oo fashilisay waxyaabihii ay shacabka u sheegi jireen.
« Maleeshiyaadka Mushrikiinta iyo kuwa Dowlada KMG ah oo Haweenka Muslimaadka gacmahooda uga fiiqayay Indha shareerka iyo Xijaabka Adag Wadada Dabka ee magaalada Muqdisho. Wilaayada islaamiga G/gaduud oo sheegtay in ay dhawaan maamulo usamaynayso degmooyinka gobalka. »